Manchester United oo ku sugan marxalad khatar ah – Hornafrik Media Network
Manchester United oo ku sugan marxalad khatar ah
Kooxda kubbadda cagta ee Manchister United ayaa ku sugan marxalad khatar ah kadib markii dhaqaale ahaan ay ka saramareen kooxaha Manchester City iyo Liverpool, sida lagu xusay qaiimeynta dhaqliga ee Deloitte’s Football Money League.
United ayaa 2018-2019 waxa ay heshay lacag dhan £627.1m taasina waxay kooxda dhigaty kaalinta sedexaad ee kala sarreeynta sanadkaan, waxay ka dambeeysaa kooxaha Barcelona oo heshay (£741.1m) iyo Real Madrid oo kasbatay lacag dhan (£667.5m).
Kooxaha ugu soo dhow ee ay ku hardamaan Premier League-ga waa City iyo Liverpool oo sida ay ukala horeeyaan ugalay kaalimaha lixaad iyo todobaad ee heerka kala sareeynta dakhliga ee kooxaha Ingiriiska.
Tottenham ayaa hadda dhaqaale ahaan waxaa ay gartay meel wanaagsan waxaaynta ku jirtaa kaalinta sideedaad, waa meeshii ugu sareeysay ee ay kooxdu gaarto dakhli ahaan, Chelsea iyo Arsenal ayaa sida y u kala horeeyaan waxaa ay ugu kala jiraan kaalimaha sagaalaad iyo 11-aad.
Manchester United waxay ahayd kooxda ugu dakhliga badan kooxaha Ingiriiska tan iyo markii ay shirkadda Deloitte billowday qiimeynteeda sanadkii 1996-97dii.
Sikastaba, waxaa la saadaalinayaa in kooxdu ay dhaqli ahaan lumin doonto lacag u dhaxaysa £560-580m 2019-2020-ka, waana sanadkii labaad ee xiriir ah.
Dan Jones oo ka tirsan kooxda ganacsiga cayaaraha ee Deloitte ayaa aaminsan in isbedelka dhaqcay uu macquul yahay.
“Manchester United waxay ahayd kooxdii ugu sareeysay tan iyo markii aan qiimeynta billownay, laakiin arrintu cadaadis ayey isu bedeli doontaa marka aan soo saarno 2021-ka” ayuu kazoo xigaty TV-ga SKY Sports.
“Tani waxay balaaraneeysaa marka sanadkaan uu u wanaagsanaado Liverpool, sidaas darted waxaan u maleyneynaa in Man Unted ay marka koowaad khasareeyso. Qayb kale ayaa sanadkaan la socon doonta, haddii ay City iyo Liverpool Champions League-ga meel fiican ka tagaan.
“Waan hubaan in Man United ay halkaas ku khasaari doonto. Hadii aad ka fekereeyso meeshii aan joognay 10 sano ka hor, aragtida ah in City ay dhaqaalaha ku dhaafeyso United ma aysan muuqan lahayn” ayuu hadalkiisa ku daray masuuka laga wareeystay qiimeynta sanadkaan.
Government troops arrest a judge and fighters, retake significant village from Al-shabaab
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Suldaanka cusub ee dalka Cumaan, Sawirro